Law & More inoshanda yedata. Kuti ndikuzivise nenzira yakajeka uye pachena nezvekugadziriswa kwe data rako pachako, ichi chirevo chekuvanzika chinonyorwa. Law & More inoremekedza data rako rega uye rinoona kuti ruzivo rwemunhu rwunopihwa kwatiri runobatwa nenzira yakavanzika. Chirevo ichi chekuvanzika chinoshandira chisungo chekuzivisa zvinyorwa zveani Law & More inoshanda yedata. Ichi chisungo chinobva kune General Data Dziviriro Regulation (GDPR). Mune chirevo ichi chekuvanzika mibvunzo yakakosha ine chekuita nekugadzirisa kwega data ne Law & More ichapindurwa.
Law & More ndiye anotonga nezvekugadziriswa kwemashoko ako pachako. Law & More inowanikwa De Zaale 11 (5612 AJ) Eindhoven. Kana mibvunzo ikamuka nezve chirevo ichi chekuvanzika, unogona kubata nesu. Unogona kutisvitsa parunhare panhamba dzinoti +31 (0) 40 369 06 80 uye uchishandisa email pa [email inodzivirirwa]
Yedu yedata ruzivo rwese runotiudza chimwe chinhu nezvemunhu kana chinogona kusangana nemunhu. Ruzivo rwunotiudza zvisina kunanga chinhu pamusoro pemunhu, inoonekwawo seyako data. Mune chirevo ichi chekuchengetedza, data rako rega rinoreva ruzivo rwese kuti Law & More maitiro anobva kwauri uye aunogona kuzikanwa nawo.
Law & More inotsvaga yega data kuti ipe masevhisi kune vatengi kana yega data inopihwa nedatha data pachayo. Izvi zvinosanganisira ruzivo rwekuonanaidzana uye humwe humwe humwe ruzivo runodiwa pakugadzirisa nyaya yako, data rako wega iwe rawakaizadza pamafomu ekutaurirana kana yewebhu mafomu, ruzivo rwaunopa panguva yekubvunzurudzwa), data rako pachako rinowanikwa pane yeruzhinji mawebhusaiti kana data pachako inogona kuwanikwa kubva kune yeruzhinji marejista, akadai seCadastral Registry uye yeRejista Bhizinesi reChamber of Commerce. Law & More inotsvaga yega data kuti ipe masevhisi, kuvandudza masevhisi aya uye kugona kutaura newe pachako sedanho re data.
Yaani data rake rakagadziriswa Law & More?
Ichi chirevo chekuvanzika chinoshanda kune vanhu vese vane data rakagadziriswa naro Law & More. Law & More inoshanda data rako revanhu vatinosinata navo kana zvakananga, tinoda kuve kana kuve nehukama. Izvi zvinosanganisira vanhu vanotevera:
(vanogona) vatengi ve Law & More;
vanhu vanofarira mabasa e Law & More;
vanhu vakabatana kune kambani kana sangano naro Law & More a, anoda kuve kana ave nehukama;
vashanyi vewebsite Law & More;
mumwe nemumwe munhu anotaurirana Law & More.
Chinangwa chekugadzirisa kwega data
Law & More inochengetedza data rako pachako nekuda kwezvinangwa zvinotevera:
Kupa mabasa epamutemo
Kana iwe ukitirenda kuitira kuti upe mabasa epamutemo, tinokukumbira kuti ugovane nesu zvekutaurirana. Izvo zvinogona zvakare kuve zvakakosha kugamuchira imwe data yako pachako kuitira kubata nyaya yako, zvichienderana nemhando yechinhu ichocho. Uye zvakare, yako pachako data ichashandiswa kuitira kuti invoice yemabasa anopihwa. Kana zvichidikanwa mukupa masevhisi edu, isu tinopa yako pachako data kune vechitatu mapato.
Law & More inonyoresa yako data pachako mune system uye inochengeta iyi data kuti ikupe ruzivo kwauri. Izvi zvinogona kuve ruzivo zvine chekuita nehukama hwako na Law & More. Kana iwe usina hukama naye Law & More (zvakadaro), iwe unokwanisa kukumbira ruzivo uchishandisa fomu yekutaurirana pane webhusaiti. Law & More inoshanda yako pachako data kuti ikubate uye kuti ikupe iwe ruzivo rwakakumbirwa.
Kuzadzisa zvisungo zvepamutemo
Law & More inoshanda yako pachako data kuti kuzadzisa zviri pamutemo zvisungo. Maererano nemutemo uye nemitemo yekuzvibata inoshanda kune magweta, isu tinosungirwa kuti tizivise ziviso yako pachinzvimbo chegwaro rechokwadi rezvitupa.
Kuunganidzwa uye kusarudzwa
Law & More inounganidza yako data yega nekuda kwechinangwa chekutora uye kusarudza. Paunotumira basa kunyorera Law & More, yako data yega yakachengetwa kuitira kuti uone kana iwe uchizokokwa kuzobvunzurudzwa yebasa uye kuitira kuti ubate iwe zvine chekuita nebasa rako.
Law & More inoshandisa akati wandei midhiya enhau, ayo ari Facebook, Instagram, Twitter uye LinkedIn. Kana iwe ukashandisa mabasa ari pawebhusaiti nezve vezvenhau, isu tinokwanisa kuunganidza yako pachako data kuburikidza nevezvenhau midhiya network ine hanya.
Kuyera bhizinesi shandisa webhusaiti
Kuyera kushandiswa kwebhizinesi webhusaiti yayo, Law & More inoshandisa iyo Leadinfo sevhisi muRotterdam. Iyi sevhisi inoratidza mazita ekambani nemakero zvichienderana ne IP kero dzevashanyi. Iyo IP kero haina kubatanidzwa.
Magiramu ekugadziriswa kwe data rako pachako
Law & More inoshanda yako pachako data pane imwechete kana yakawanda yezvikonzero zvinotevera:
Law & More inogona kugadzirisa data rako pachako nekuti wakapa mvumo yekugadzirisa kwakadaro. Une kodzero yekubvisa mvumo iyi nguva dzese.
Kubva pachibvumirano (chichagumiswa)
Kana iwe uchihaya Law & More kupa mabasa ezvemitemo, isu tichagadzirisa data rako pachako kana uye nekuwedzera zvinodiwa pakuita aya masevhisi.
Yako yako data ichagadziriswa kuitira kuti iite maererano nemutemo zvisungo. Sekureva kweDutch Anti mari yekupamba mari uye mutemo wehugandanga hwemari, magweta anosungirwa kutora uye kurekodha rumwe ruzivo. Izvi zvinosanganisira kuti, pakati pevamwe, kuzivikanwa kwevatengi kunofanirwa kuve kuchisimbiswa.
Law & More inoshanda yako yega data kana isu tine zviri pamutemo kufarira kuzviita uye kana iyo yekugadzirisa isiri kutyora kodzero yako yekuchengetedza zvakavanzika nenzira isina kujairika.
Kugovera data rako pachako nevechitatu mapato
Law & More inofumura data rako wega kune vechitatu mapato izvi pazvinofanirwa kupa masevhisi edu, tichiremekedza zvikonzero zvambotaurwa. Izvi zvinogona kusanganisira kupera kwechibvumirano, kuburitsa ruzivo rwemunhu zvine chekuita nezve (zviri pamutemo) maitirwo, kunyorerana tsamba neanopokana naye kana kupa mukana kune vechitatu vamiriri uye kutumwa Law & More, senge ICT-vanopa. Pamusoro pe, Law & More inogona kupa yega data kumunhu wechitatu, senge maneja wekutarisira kana masimba akasarudzika, zvisinei nekuti pane basa repamutemo rekuita saizvozvo.
Chibvumirano che processor chinozopedzwa nemunhu wega wechitatu uyo ​​anogadzira dhata yako pachako akamiririra uye anotumirwa Law & More. Semhedzisiro, processor yega yega inosungirwawo kutevedzera GDPR. Yetatu mapato anopiwa simba ne Law & More, asi vape masevhisi seanodzora, vanozvipa basa rekutevera neGDPR. Izvi zvinosanganisira semuenzaniso accountant uye notaries.
Kuchengetedza data rako pachako
Law & More inokoshesa kuchengetedzeka uye kuchengetedzwa kwega yako data kusvika padanho rakakura uye inopa yakakodzera tekinoroji uye kurongeka matanho ekuona danho redziviriro rakakodzera kune njodzi, ichichengeta mamiriro ehunyanzvi mupfungwa. Rini Law & More inoshandisa masevhisi emapato ezvechitatu, Law & More inonyora zvibvumirano zvine chekuita nenhanho dzinofanirwa kutorwa muchibvumirano che processor.
Law & More inochengetera iyo data yega iyo iri kugadziriswa isisakwanisi kupfuura zvakafanira kuitira kuti isvike kune zvakambofungidzirwa chinangwa icho data rakaunganidzwa, kana kupfuura rinodikanwa nemitemo kana mirau.
Kodzero dzekuvanzika dzezvidzidzo zve data
Zvinoenderana nemutemo wekuvanzika, iwe une dzimwe kodzero kana yako pachako data iri kugadziriswa:
Une kodzero yekuwana ruzivo rwekuti ndeipi data rako rauri kugadziriswa uye kuwana mukana kune idzi data pachako.
Une kodzero yekukumbira mutongi kuti agadzirise kana kupedzisa asina kukwana kana asina kukwana data rako.
Kurudyi kukanganisa ('kurudyi kukanganwika')
Une kodzero yekukumbira Law & More kudzima data rako pachako iro riri kugadziriswa. Law & More ichadzima idzi data pachako mune zvinotevera mamiriro:
kana iyo data yega isingachadikanwa maererano nechinangwa chavakaunganidzwa;
kana ukabvisa mvumo yako pakavakirwa matanho uye hapana imwe nzvimbo yepamutemo yekugadzirisa;
kana iwe uchiramba kuongororwa uye pasina zvikonzero zvepamutemo zvekugadzirisa;
kana iyo data yako pachako yaitwa zvisiri pamutemo;
kana iyo yako pachako data ichizodzimwa kuti ienderane nechisungo chepamutemo.
Kodzero yekudzorwa kwekugadzirisa
Une kodzero yekukumbira Law & More kudzora mashandisiro e data rako pachako kana iwe uchitenda kuti hazvidikanwe kuti rumwe ruzivo rwurirwe.
Kodzero yekuisa mari
Une kodzero yekugamuchira yako pachako data iyo Law & More maitiro uye kuendesa iwo data kune mumwe mutongi.
Une kodzero, chero nguva, yekupikisa kugadzirisa kwega data rako ne Law & More.
Unogona kutumira chikumbiro chekuwana, kugadzirisazve kana kupedzisa, kukanganisa, kudzikamisa, kutakura data kana kubviswa kwemvumo yakapihwa kune Law & More nekutumira email kune inotevera email kero: [email inodzivirirwa]. Iwe uchagamuchira mhinduro kune chako chikumbiro mukati memavhiki mana. Panogona kuve nemamiriro ezvinhu kupi Law & More haikwanise (zvizere) kuita chikumbiro chako. Izvi zvinogona semuenzaniso kuva izvo kana zvakavanzika zvemagweta kana zviri pamutemo nguva yekuchengeta zvichisanganiswa.